कुन समयमा निन्द्रा खुल्नुको अर्थ के हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् « Npnews
कुन समयमा निन्द्रा खुल्नुको अर्थ के हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
तपाईको आँखा राती अचानक खुल्छ र फेरी निदाउन बढी समय लाग्छ । यस्तो प्रक्रिया एक-दुई दिन मात्र नभई लगातार भैरहेको छ या हरेक राती निन्द्रा एकै समयमा खुल्छ भने चाइनिज मान्यता अनुसार, यो तपाईसँग भैरहेको कुनै विशेष कुराको संकेत हुनसक्छ या कुनै शक्तिको प्रभावको कारण पनि यस्तो हुनसक्छ । आज हामी बताउँदैछौँ कि कुन समयमा निन्द्रा खुल्नुको अर्थ के हुन्छ । कतिपय मानिसहरूको दिनहुँ निश्चित समयमा उठ्ने नियम हुन्छ, यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको कुरा ती मानिसहरूका लागि लागु हुँदैन । जो मानिसको निन्द्रा दिनहुँ एकै समयमा अचानक आत्तिएर वा डरले खुल्छ भने यो संकेत उनीहरूको लागि हो । यदि तपाईको निन्द्रा कुनै सपनाको कारणले खराब हुँदैछ भने हुनसक्छ यो सपना तपाईको लागि कुनै सन्देश हो । आज हामी तपाईलाई बताउँदैछौँ, कुन समयमा निन्द्रा खुल्नुको अर्थ के हुन्छ ।
राती ११ देखि १ बजेको बीचमा उठ्नु-
यदि तपाई लगातार यो समयमा उठ्नुहुन्छ भने सम्झनुहोस् कि यो समय तपाईको भावनात्मक रूपले निराशातर्फ इशारा गर्छ । पवित्र मन्त्रहरूको जप, माफ गर्ने बानी र आफैँलाई स्वीकार गर्ने बानीले यसबाट छुटकारा दिलाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
राती १ देखि ३ बजेको बीचमा उठ्नु-
यो समय तपाईको कलेजो सँग सम्बन्धित हुन्छ । हरेक राती यस समय सीमाको अवधिमा उठ्नु तपाईको आन्तरिक रूपमा रहेको रिसतर्फ इशारा गर्छ । यसबाट बँच्नका लागि चिसो पानी पिउनु पर्दछ र ध्यान गर्नुपर्दछ ।
हरेक राती ३ देखि ५ बजे उठ्नु-
यो समय तपाईको फोक्सो र ऊर्जासँग जोडिएको हुन्छ, जसले तपाईको आन्तरिक रूपमा चलिरहेको भावना र निराशालाई दर्शाउँछ । तपाईले परमात्माप्रति विश्वास देखाउँदै यस समयमा एक गहिरो सास लिएर फेरी सुत्ने कोशिश गर्नुपर्दछ ।
हरेक राती ५ देखि ७ बजेको बीचमा उठ्नु-
यस समय सीमाको अवधिमा ऊर्जा बढी संचालित हुन्छ, जसको कारण यदि तपाई दिनहुँ यस समय सीमाको अवधिमा उठ्नुहुन्छ भने यसको अर्थ तपाई भावनात्मक रूपमा निकै कमजोर र दुखी हुनुहुन्छ । यसबाट बँच्नका लागि तपाईले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज गर्नुपर्दछ ।